Jubbaland oo Nabad ugu Baaqday Beelo walaalo ah oo ku Dagaalamay Puntland – Radio Daljir
Oktoobar 4, 2015 6:02 b 0
Axad, Oktoobar 04, 2015 (Daljir) —Maamulka Jubbaland ayaa ka qayb qaadanaya xalinta daagaalka ka socda deegaanada Cagaarane iyo Qorilay oo katirsan gobolada Sool iyo Mudug kuwaas oo mudo ku dhow 10 sano dirir colaadeed dhextaalay.
Marar badan ayaa laysku dayey in la xaliyo colaada beelaha balse marna laguma guulaysan,dagaalka labada beelood waxaa ku nafwaayey Dhalinyaro iyo Odayaal kuwaas oo marba marka ka dambaysa uu dagaalkoodu sii xoogaysanayey.
Waxaa la sheegay in markii hore Colaada labada beelood ka dhalatay qodista ceel biyood oo labada beelood midkood kasoo horjeestay in beesha kale ay dhulka ka qodoto Ceel biyood kuwaas oo sheegay in dhulkan ay iyagu leeyihiin,islamarkaana aysan ka qodanayn Ceelka halka beesha kalana markaa ku adkaysatay inay qodonaysao Ceelka.wixii markaa ka dambeeyey waxaa bilowday Diriir xoogan oo dad badan ku naf waayeen.
Dhawaan waxaa Burtinle tagay Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji isagoo doonayey inuu kala dhex galo beelaha dhiiga iska daadinaya, inkastoo Asbuuc kadib uu Garowe dib ugu soo laabtay waxaana la sheegay inuu kusoo guul daraystay qaboojinta Colaada labada beelood.
Bixitaanka Camay ayaa yimi kadib markii Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole uu ku dhawaaqay in dowladdu ay u istaagto sidii loo dhamayn lahaa colaada soo noq noqtay ee beelaha walaala ah dhextaala.
Jubbaland oo Puntland ay mataano yihiin ayaa haatan doonaysa inaysan eegan dagaalka u dhexeeya beelaha,waxayna Kismaayo kasoo dirtay Odayaal isugu jira Isimo iyo Nabadoono kuwaas oo qayb ka qaadan doona sidii loo xalin lahaa colaada.
Odayaasha waxaa kamid a Jubbaland soo dirtay SuldaanCabdulaahi Cali Sokor, Suldaan Cali Cowl iyo Suldaan Cumar kuwaas oo magaalada Gaalkacyo kasoo tagay oo Maadxweyne Gaas iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan joogaan.
Colaada labada beelood Puntland ayaa ku eedaysay maamulka Soomaaliland oo ay sheegtay inay hurinayso dagaalka beelaha,waxayna hada beelaha dagaalkoodu gaaray in Tuulooyinka ay dagaaan shacabka ku nool rasaaseeyaan.